Umfanekiso Womthengi Weselula | Martech Zone
NgoMgqibelo, Juni 7, 2014 NgoLwesihlanu, ngoJuni 6, i-2014 Douglas Karr
Ubuchwepheshe beselula buguqula konke. Abathengi bangathenga, bathole izinkomba, baphequlule iwebhu, bahlanganyele nabangane ngezinhlobo ezahlukahlukene zemidiya, futhi babhale izimpilo zabo ngedivayisi eyodwa encane ngokwanele ukuba ingene emaphaketheni abo. Ngo-2018, kusetshenziswa amadivayisi asebenzayo alinganiselwa ku-8.2 billion asebenzayo. Ngawo lowo nyaka, ukuhweba ngamaselula kulindeleke ukuthi kudle phezulu ama- $ 600 billion ekuthengisweni konyaka. Ngokusobala, izwe lebhizinisi liguqulwa yileli gagasi lobuchwepheshe lakamuva; futhi izinkampani ezihluleka ukwamukela imakethe entsha engomahambanendlwana maduze zizosala ngemuva.
Unyaka nonyaka njengoba abathengi bexhuma kakhulu futhi bethembela kuma-smartphones abo, amaphilisi, namalaptop, umhlaba usebenzisa ukudla okuthuthuka kakhulu kobuchwepheshe beselula. Lo mkhuba osheshayo unikeza amathuba amakhulu kubakhangisi, abacwaningi bemakethe, namabhizinisi. Njengoba umthengi ngamunye exhunywe kwinethiwekhi yomhlaba wonke futhi ethintana njalo nezikrini zabo zamaselula, amabhizinisi manje angakwazi ukufinyelela kumakhasimende awo ngezinga elikhulayo lomuntu siqu, nangezindlela ezicashile ngokuya ngokufihlekile.
Ukwenza kanjalo, noma kunjalo, kudinga ukuqonda okujulile kwe- indlela abantu abaxhumana ngayo nabezindaba zanamuhla. Ukuthola lokhu kuqonda okubalulekile kudinga ucwaningo. Ngakho-ke ukukhulisa ukufunda nokubhala kwakho kwamaselula futhi uthole amaqiniso ngobuchwepheshe obushayela umhlaba webhizinisi namuhla, I-vouchercloud ihlanganise amaqiniso nezibalo ezisematheni mayelana nokuthi abathengi basebenzisa kanjani amaselula. Kungashintsha nje indlela owenza ngayo ibhizinisi.
Tags: amadili wendawom-ezentengiselwanoukuhwebaukufinyelela kweselulaUkumakethwa Kwamaselula NethebulethiIzinhlelo zokusebenza zeselulaumsindo weselulaidatha yamafu yeselulacommerce mobileumthengi weselulaamakhuphoni eselulaidatha yeselulaukwabelana ngefayela leselulaukwethembeka kweselulaiselula m2mamapulatifomu eselulaividiyo yeselulaisikhwama seselulaiwebhu yeselulatekutsengisavouchercoud